तिथि मेरो पत्रु »5पहिलो Daters को प्रकार. एक तपाईं हुनुहुन्छ जो?
द्वारा Samantha ग्रीव्स
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 20 2021 |3मिनेट पढ्न
डेटिङ गर्न एक विज्ञान छ. यो डेटिङ जीवन तपाईं र तपाईंको मिति एक अर्को पूरक र सकारात्मक आकर्षण मा परिणाम आशा जहाँ एक रसायन प्रयोग तुलना गर्न सकिन्छ.
एक सफल मिति daters को अनुकूलता निर्भर. अनि तपाईं dater कस्तो प्रकारको थाह तपाईं साँच्चै जो सम्झौता नगरी आफ्नो सकारात्मक रूपको बढी बाहिर ल्याउन मदत गर्न सक्छ.
त्यसैले, dater तपाईं कस्तो प्रकारको तपाईं भन्नुहुन्छ?
तपाईं अधिक-talkative हो भने, तपाईंले एक extrovert भन्दा बढी हो. कहिलेकाहीं gab को आफ्नो उपहार कुरा गर्न आवश्यकता संग गर्न स्नायु संग गर्न बढी र कम छ. कुराकानी गर्दा तपाईं कहिलेकाहीं मानिसहरूलाई नष्ट, कोर्स को उद्देश्य मा, र तिमी आफु सुनाउन तपाईंलाई प्रश्न सोध्छन् जब सही शब्द छान्न कुनै समस्या छ. तपाईं जस्तै तिमीलाई कुरा कुरा सुन्न कसरी सिक्न हुनेछ. तपाईं र तपाईंको मिति प्रत्येक अन्य चिन्नुको सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ. यसो गर्दा तपाईं दुई एक राम्रो फिट वा नमिल्ने हो भने तपाईं निर्धारण मदत गर्नेछ.
सुश्री. & श्री. हामी
उत्तिकै एक प्रेमी र मित्र हुन सक्ने पत्ता लगाउने कुनै यो पहिलो dater महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं पहिलो तारीख मा धेरै स्पष्ट यस बिन्दु बनाउन. तपाईं आफ्नो मिति थाह मिल्यो छु अघि, तपाईं चाँडै दोस्रो मिति लागि योजना बनाउन र पनि सँगै Getaways. तपाईं यो तपाईं सख्त पकडनेवाला वा तपाईं छैनन् भने पनि नियन्त्रणमा छन् भनेर आफ्नो मिति छाप दिन सक्छ "। म" धेरै "हामी छ सक्छ" र पर्याप्त छैन आफ्नो वाक्य शुरू हुन सक्छ र यो उनको सामु निकास योजना हुन सक्छ मिठाई प्रदान गर्न सक्छन् वेट्रेस. खराबी अर्को स्तर आफ्नो पहिलो तारीख बढ मा आफ्नो भावना व्यक्त संग छ, बस सुनिश्चित तपाईं आफ्नो मिति जस्तै चाहनुहुन्छ भने निर्धारित बनाउन.
तिमी निश्चित स्वतन्त्र छन् र तिमी को हो मान्य कसैलाई वा केहि पनि आवश्यकता छैन. स्वतन्त्रता तपाईं को लागि एक प्राथमिकता हो र यसको विरुद्धमा कुनै पनि धम्की आफ्नो जीवनको cutout हुन्छ. मन मा यो राख्नुहोस्: तपाईं कुनै आवश्यकता वा पनि untamable भइरहेको छैन ऊर्जा बाहिर हुँदा, यो आफ्नो मिति एक बारी-बन्द हुन सक्छ. हरेक केही क्षमता आवश्यक महसुस गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं बस मिति चाहनुहुन्छ र आफ्नो मिति बढी समय चाँडै चाहनु हुन्छ कि छाप दिन चाहँदैनन् भने, भन्न. पहिलो मिति तालिका मा सबै बाहिर राख्न सबै भन्दा राम्रो समय छ.
तपाईं dater को यस प्रकार हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले देखि नै तल सौंदर्यशास्त्र गर्न चाहनुहुन्छ व्यक्ति को प्रकार. तपाईं पनि आफ्नो जीवन विवाह र बच्चाहरु जस्तै प्रमुख जीवन घटनाहरूको पूर्व-नियोजित तालिका मा संगठित. तपाईं आफ्नो पहिलो तारीख मा आफ्नो आदर्श विवाह योजना ल्याउन सोच्न अघि, आफ्नो लक्ष्य र आकांक्षालाई माथि मेल भने आफ्नो मिति पानी परीक्षण र देख्न. तिनीहरूले कसैको चलचित्र जान चाहनुहुन्छ जब कुनै प्रतिबद्धता सम्बन्धित कुराहरू सुन्न लागि यो डरावना हुन सक्छ.
यस पुनःसुरु पाठक
आफ्नो छिमेकीलाई माथि आदर्शवादी जस्तै धेरै, तपाईँ चाहनुहुन्छ के थाहा तर तपाईं आफ्नो मिति आफ्नो पैसा बनाउँछ कसरी एक बिट बढी ध्यान छन्. यो आफ्नो प्रभाव र वित्त गर्न आउँदा तपाईं तिनीहरूले भइ सकेको गर्नुपर्छ कसरी एक सख्त विचार छ. तिनीहरू लागि काम वा को लागि काम गर्थे तिनीहरू हुन् जो आफ्नो धारणा असर के छ. यो जीवन को सबै पक्ष आउँदा तपाईं चाहनुहुन्छ व्यक्ति को प्रकार थाह पाएर ठूलो छ. यो पूर्णतया आफ्नो मापदण्ड पूरा नगर्ने मान्छे संग डेटिङ एक बिट बढी खुला हुन प्रयास गरौं. तपाईं आफ्नो आदर्शको फिट गर्दैन व्यक्तिलाई लागि पर्नु भने तपाईं हैरान हुन सक्छ, यो हुन्छ.
कसरी एक तोड माथि पछि सामना गर्न
4 धन्य सम्वन्धमा शक्तिशाली बानीहरु